LEGO 76188 ကိုအရင်ကြည့်ပါ Batman Classic တီဗီစီးရီး Batmobile
13 / 04 / 2021 14 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 875 Views စာ0မှတ်ချက် 1966 Batman, 40453 Batman အဆိုပါ Penguins & Harley Quinn vs., 76052 Batman Classic တီဗီစီးရီး Batcave, 76188 Batman Classic တီဗီစီးရီး Batmobile, အာဒံအနောက်, Batman, Cesar Romero, Lego, Lego Batman, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego သုံးသပ်ချက်များ
၏ပထမ ဦး ဆုံးသုံးသပ်ချက်များ 76188 Batman Classic တီဗီစီးရီး Batmobile st ဖြစ်ကြသည်artအွန်လိုင်းဆင်းသက်ဖို့ ing, ဤရုံအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်တူသောပုံရသည် Lego ၁၉၆၆ Batmobile ။
Hoth အုတ် နှစ်ခုထဲကတစ်ခု၏အစောပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် Batman ဒီလနှောင်းပိုင်းမှာစတင်မိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပြီးပထမ ဦး ဆုံးဗိုလ်မှူးကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ် DC (ဇန်နဝါရီလရဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်း pack ကိုကျော်လွန်ပြီး) 2021 ၏လွှတ်ပေး 40453 Batman အဆိုပါ Penguins & Harley Quinn vs.).
ပြင်သစ် Lego Fan Media ၏ပြခန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သို့ကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်မည်နည်း 76188 Batman Classic တီဗီစီးရီး Batmobile အတူတကွလာသည်၊ ၎င်း၏လှည့် display display base နှင့်ကပ်ထားသည့် plaque နှင့်၎င်း၏အသေးစားပုံနှစ်ခုပါရှိသည်။ Batman နှင့် Joker ။
ပုံရိပ်တွေ: Hoth အုတ်
အဆိုပါ Dark Knight နှင့်သူ၏မဟာ - nemesis နှစ် ဦး စလုံးဟာသူတို့ရဲ့ပေါ်လာအပေါ်ပုံစံနေကြသည် classic 1960 Batman Adam West နှင့် Cesar Romero တို့ဖော်ပြသည့်ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲများ (အမည်မှသဲလွန်စ) ။ Caped Crusader စီးနည်းတူအသေးစားဓာတ်ပုံများ၏ဒီဇိုင်းများသည် ၇၆၀၅၂ တွင်တွေ့ခဲ့သည့်ယခင်ဗားရှင်းနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားသည်။ Batman Classic တီဗီစီးရီး Batcave ။
တကယ်တော့, အုတ်ဖိုယခုပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တွင် ၁၉၆၆ Batmobiles၊ Batmen နှင့် Jokers တို့အကြားတွင်နှိုင်းယှဉ်ပြနိုင်သောသုံးပုံတစ်ပုံပါရှိသည်။ အသေးအဖှဲမြားသညျ (အဘယ်မှာရှိရဲ့) မူရင်းအဖြစ်အတော်လေးအေးမြမဖြစ်အံ့သောငှါနေစဉ် Batmandual- ပုံသွင်းခြေထောက်များ?), Batmobile ကိုယ်တိုင်က၎င်း၏ 2016 ယခင်ထက်အများကြီးတိုးတက်လာကြည့်ရှုသည်။
မင်း p ကိုလိုအပ်လိမ့်မယ်art 34.99-piece ကိုကောက်ဖို့£ 29.99 / $ 29.99 / € 345 နှင့်အတူ 76188 Batman Classic တီဗီစီးရီး Batmobile ကမှာစတင်သောအခါ LEGO.com နှင့် Lego Aprilပြီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင်စပါးသီးနှံများနှင့်အတူသိုလှောင်ထားသည် အသစ်အစုံ ဖြတ်. Star Wars, Marvel, Minions နှင့်ပိုပြီး။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ နောက်ထပ် Bat- မော်တော်ယာဉ်လည်းပါဝင်သောစာရင်းအပြည့်အစုံအတွက် 76180 Batman Joker နှင့် Batmobile Chase.
အသားပေးပုံရိပ်: Hoth အုတ်
← LEGO MASTERS သြစတြေးလျရာသီ ၃ ပွဲကိုပြသမည်ဖြစ်သည်
တစ်နေ့တာ၏အုတ်ပုံ: သင်သည် Jedi မဟုတ်သေးပါ →